Al shabaab oo la sheegay in ay halis weyn ku tahay ammaanka Kenya - Halbeeg News
Al shabaab oo la sheegay in ay halis weyn ku tahay ammaanka Kenya
NAIROBI (HALBEEG) – Warbixin ay soo saartay Hay’adda Caalamiga ah ee Xasaradaha iyo Khilaafaadka ka faalloota, ayaa lagu sheegay in Al shabaab weli halis weyn ku tahay dalka Kenya, shan sano kaddib weerarkii Westgate Mall.
Warbixinta oo cinwaan looga dhigay ‘Al shabaab shan sano kaddib weerarkii Westgate: weli waa halis ka taagan Geeska Afrika’ waxaa loogu sheegay in Al shabaab bedeshay xeeladihii ay horay u adeegsan jirtay.
Tan iyo sannadkii 2015, Al shabaab waxay xoogga saartay sidii ay dhallinyaro badan uga qoran lahayd gudaha dalka Kenya, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari iyo Gobolka Xeebta.
Al shabaab ayaa sidoo kale isku dayday in ay dad taabacsan ku yeelato gobollada waqooyiga iyo bartamaha Kenya, iyadoo diiradda saareysa dhallinyarada horay Christian-ka u ahaa balse dhowaan diinta Islaamka qaatay iyo kuwa ay yartahay khibradda iyo waayo aragnimada ay u leeyihiin arrimaha gobolka.
Warbixinta waxaa sidoo kale lagu sheegay in Al shabaab weerarradeeda xooggooda kusoo ururisay xadka Kenya iyo Soomaaliya, siiba qaraxyada lala beegsado gaadiidka ciidanka iyo shaqaalaha Kenya, iyadoo dhinaca kale xulafaysi la samaysatay kooxda xagjirka ah ee ka dagaallanta gobolka Pwani ee dalka Tanzania oo xad laleh Kenya.
Warbixintan ayaa kusoo aadayaa shan sano kaddib weerarkii khasaaraha badan dhaliyey ee Al shabaab ku burburisay xaruntii dumaamaysiga Westgate Mall ee magaalada Nairobi.
Kooxo hubeysan oo gabadh ardayad ah ku dhex dilay mid kamid ah jaamacadaha Muqdisho